Power-Supply Toetra mampiavaka - China BST (Hong Kong) Industrial
Power-Supply Toetra mampiavaka
Maro ireo hery-famatsian-toetra mahakasika ny asa:
Voatarika: Ny fiovaovana ao amin'ny DC Output malefaka toy ny asa-potoana amin'ny tsy tapaka tsipika malefaka, entana, ary Ambient mari-pana.
Mavitrika Valiny: A hery ny tahirin dia azo ampiasaina amin'ny rafitra iray izay misy dia fepetra takiana mba hanomezana haingana mavitrika valin'ny fiovana eo amin'ny entana hery. Mety ho ny raharaha noho ny enta-mavesatra ny haingam-pandeha microprocessors amin'ny hery-fiasan'ny fitantanana. Amin'ity tranga ity, ny microprocessor mety ho amin'ny standby fanjakana sy ny didy tsy maintsy manomboka ny na hiverina hiala avy hatrany, izay mametraka avo onja mavitrika amin'ny fifadian-kanina tahan'ny fiakarana eo amin'ny famatsiana ny hery. Mba handraisana ny microprocessor, ny famatsiana ny Output malefaka fiakarana dia tsy maintsy miakatra na midina ao anatin'ny fotoana voatondro mazava ny elanelam-potoana io, nefa tsy tafahoatra overshoot.
Fahombiazana: Taham ny Output-to-torohevitra fahefana (in isan-jato), refesina amin'ny entana nomena anarana ankehitriny amin'ny andalana fepetra (manjonotra / Pin).
Holdup andro: Time mandritra izany fotoana izany ny famatsiana ny fahefana malefaka Output mitoetra ao anatin'ny famaritana manaraka ny fahaverezan'ny fahan'ny hery.
Inrush amin'izao fotoana izao: Peak instantaneous fahan'ny voasarika ankehitriny amin'ny alalan'ny famatsiana ny fahefana amin'ny indray-on.
Fenitra iraisam-pirenena: Omeo ny hery fiarovana famatsiana ny fepetra sy ny allowable Emi (herinaratra fitsabahan'ny) ambaratonga.
Fitokana-monina: elektrika fisarahana eo fahan'ny sy ny Output ny hery refesina amin'ny volts famatsiana. Ny tsy mitoka-monina dia manana DC lalana eo amin'ny fahan'ny sy ny Output ny tolotra, fa mitokana hery famatsiana mampiasa ny mpanova hanafoana ny lalana eo amin'ny torohevitra DC sy ny output.
Line lalàna: fiovana eo amin'ny vidin'ny DC Output malefaka vokatry ny fiovana eo amin'ny As torohevitra malefaka, mazava toy ny fiovan'ny ± MV na ±%.
Load lalàna: fiovana eo amin'ny vidin'ny DC Output malefaka vokatry ny fiovana eo amin'ny entana avy amin'ny faritra misokatra-ho-laharana indrindra Output amin'izao fotoana izao, mazava toy ny fiovan'ny ± MV na ±%.
Output feo: Mety hitranga tamin'ny herin'ny famatsiana amin'ny endrika fohy ranolava ny avo angovo matetika. Ny feo dia vokatry ny mamaly ny sy ny fanatanterahana ny katsentsitra ao anatin'ny hery capacitances famatsiana mandritra ny fandidiana tsingerin'ny. Ny amplitude dia miova, ary afaka miankina amin'ny entana impedance, sivana ivelany, sy ny fomba fandrefesana.
Output malefaka Karakarao tsara: Most power supplies have the ability to “trim” the output voltage, whose adjustment range does not need to be large, usually about ±10%. One common usage is to compensate for the dc distribution voltage drop within the system. Trimming can either be upward or downward from the nominal setting using an external resistor or potentiometer.
Potoana sy ny fahadisoan-dàlana kisendrasendra (PARD): tsy ilaina potoana (ripple) na aperiodic (tabataba) fahadisoan-dàlana ny hery-famatsian Output malefaka avy amin'ny anarana vidiny. PARD dia miseho amin'ny fara tampony MV-to-tendrony na RMS amin'ny voatondro passante.
Peak amin'izao fotoana izao: Ny ambony indrindra amin'izao fotoana izao fa afaka manome hery ny tahirin ho an'ny vanim-potoana fohy.
Tampon'isan'ny hery: Ny tena fahefana ambony indrindra Output fa ny hery afaka mamokatra tsy misy famatsiana fahavoazana. Tsy tsara matetika any an-dafin'ny mitohy hery azo antoka Output fahaizany, ary tokony ho ampiasaina ihany tsindraindray.
Power-famatsian sequencing: Sequential kosa-ny sy eny ny hery ilaina mba hadinina amin'ny rafitra amin'ny fandidiana maro voltages. Izany hoe, tsy maintsy ampiharina voltages ao amin'ny dingana manokana, raha tsy izany ny rafitra mety ho simba. Ohatra, taorian'ny fampiharana ny voalohany malefaka Ary mahatratra ny sanda manokana, ny faharoa dia azo ramped malefaka izy, sy ny sisa. Sequencing miasa amin'ny hery mifanohitra rehefa esorina, hafainganam-pandeha na dia tsy matetika toraka ny olana toy ny indray-on.
Remote tamin'ny / eny: Izany dia nisafidy ny Switches koa izy hampody hery sy eny amin'ny entana. Power-famatsian data-taratasy fepetra arahana matetika tsipiriany ny masontsivana ho lavitra DC tamin'ny / eny, nitanisa ny amin'ny lojika sy eny haavon'ny ilaina.
Remote heviny: Ny fanaon'ny famatsiana manara-maso ny fahefana malefaka Output sy manome sakafo ny ampahany amin 'izany indray ny famatsiana mba hanome lalàna malefaka. Amin'izany fomba izany, raha mitady ny Output hitsangana na lavo, ny tamberina mifehy ny famatsiana ny output malefaka. Na dia izany aza, mba hihazona foana Output amin'ny entana, ny hery famatsiana dia tokony hanara-maso ny tena malefaka amin'ny enta-mavesatra. Fa, fifandraisana avy amin'ny hery ny famatsiana ny entana Output ny fanoherana sy ny amin'izao fotoana izao no mikoriana ny alalan 'ireo izay mamokatra ny malefaka mitete izay miteraka malefaka samy hafa ny Output ny famatsiana sy ny tena enta-mavesatra. Fa ny fitsipika tandrify, ny sakafo malefaka indray ny fahefana dia tokony ho famatsiana ny entana tena malefaka. Ny famatsiana ny roa (Plus sy ny Miiba) heviny lavitra fifandraisana hanara-maso ny entana tena malefaka, ny ampahany amin 'izay dia niandry indray ny famatsiana amin'ny tena malefaka kely indray mitete satria ny amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fifandraisana heviny lavitra roa no ambany dia ambany. Vokatr'izany, ny malefaka ampiharina amin'ny ny enta-mavesatra dia nifehy.
Ripple: Rectifying sy sivana ny hery ara Output famatsiana ny vokatra tao amin'ny As singa (ripple) izay mitaingina ny DC output. Ripple matetika no misy manontolo maro ny mpanova ny ara matetika, izay miankina amin'ny mpanova topology. Ripple dia somary iharan'ny entana amin'izao fotoana izao, fa azo nihena ivelany capacitor sivana.
Tracking: Rehefa mampiasa fitaovana maro andraisana Output fahefana iray na maromaro outputs manaraka ny namany amin'ny fiovana eo amin'ny tsipika, entana, sy ny mari-pana, ka dia samy mitana ny Output mitanila ihany malefaka, ao anatin'ny voatondro mazava ampy fandeferana, mikasika ny zava-dehibe iraisana.